WE67K စီးရီး CNC Electro-ဟိုက်ဒရောလစ် synchro စာနယ်ဇင်းဘရိတ် - တရုတ် Qianyi အင်တာနေရှင်နယ်ထရေးဒင်း
ဟိုက်ဒရောလစ်ထစ်စက် (ဖြတ်တောက်ခြင်းထောင့် fixed) QF28Y ...
ဟိုက်ဒရောလစ်ထစ်စက် (ပြောင်းလဲထောင့်ဖြတ်တောက်ခြင်း) ...
QC11K CNC Hydraulic Guillotine Beam ကိုမှေးညှပျ
WE67K စီးရီး CNC Electro-ဟိုက်ဒရောလစ် synchro စာနယ်ဇင်းဘရိတ်
WC67Y စီးရီး NC torsion bar ကို synchro စာနယ်ဇင်းဘရိတ်
WC67K စီးရီး CNC ဟိုက်ဒရောလစ်စာနယ်ဇင်းဘရိတ်
FOB စျေး: အမေရိကန် $ 110000-127000 / Piece
ပင်မနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ parameter သည်
> ်ဒီဇိုင်း, အဆင့်မြင့်စီစဉ်ဖွဲ့စည်းမှုကိုမြင့်မားတိကျစွာနှင့်မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူ CNC ဟိုက်ဒရောလစ်စာနယ်ဇင်းဘရိတ်။
အဆိုပါ upperbeam ၏ထပ်တူထိန်းချုပ်> Electro-ဟိုက်ဒရောလစ် servo စနစ်, အပြည့်အဝကွင်းဆက်။
3 + 1 ပုဆိန်နှင့်အတူ> ကို Standard configuration:
X ကို (backgauge ၏ရှေ့ဆက်-နောက်ပြန်)
V ကို (ဟိုက်ဒရောလစ်လှည့်ခံရသော)
ဖောက်သည်ရဲ့လိုအပ်ချက်အရသိရသည်4+ 1 ပုဆိန်,6+ 1 ပုဆိန်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုပုဆိန် optional ။
> ဟော်လန် Delem DA52S, DA58T, DA66T မြင့်မားခွဲခြားမှုနှုန်းနှင့်အတူနောက်ဆုံးပေါ်လျှပ်စစ်တိုက်နယ်နဲ့ TFT display menu ကိုအတူ DA69T CNC စနစ်, စာနယ်ဇင်းဘရိတ်များအတွက်အများဆုံးအဆင့်မြင့် CNC စနစ်ဖြစ်သည်။ စံဖွဲ့စည်းမှုပုံစံများအတွက် DELEM DA52S ။
စက်မှုအမြန်ဆွဲထား -Upper အမြန်စွဲစေနှင့် Crown function ကိုနှစ်ဦးစလုံးရှိပါတယ်။
-hydraulic လှည့်ခံရသောစနစ်ကအလိုအလျှောက်မြင့်မားတဲ့တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်အတူ CNC စနစ်ဖြင့်ထိန်းချုပ်နေပါတယ်။
> Finger-မှတ်တိုင်များဟာ linear လမ်းညွှန်တစ်လျှောက်ရွှေ့နိုင်ပါတယ်။
① CNC ထိန်းချုပ်မှုစနစ်အား
DA52s စနစ် DA58T စနစ်က
·7"ရောင်စုံ TFT display
·4ပုဆိန်အထိ
· Crown ထိန်းချုပ်မှု
·ကို USB interface
· 2D သော graphical ထိတွေ့မျက်နှာပြင်ပရိုဂရမ်းမင်း
· 15 "အမြင့်ဆုံး resolution ကိုအရောင် TFT
·ကွေး sequence ကိုတွက်ချက်မှု
· Servo နှင့်ကြိမ်နှုန်းအင်ဗာတာကိုထိန်းချုပ်
DA66T စနစ်က DA69T စနစ်က
· 17 "အမြင့်ဆုံး resolution ကိုအရောင် TFT
·ကို USB, ရံ interface
·အာရုံခံကွေး & ဆုံးမခြင်း interface ကို
· 3D နဲ့ 2D သော graphical ထိတွေ့မျက်နှာပြင် programming ကို mode ကို
ခြင်း simulation နှင့်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်· 3D visualization
စက်မှုလျင်မြန်စွာ Clamp (option ကို) စံ Clamp
③ TOOLS: အဆိုပါသေဆုံးအပိုင်းကိုအထူး workpieces ၏အပြောင်းအလဲနဲ့လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အချို့သောအကျယ်နဲ့ပေါင်းစပ်နိုင်သည့်ကွဲပြားခြားနားသောအရှည်ရှိသည်။
④လျော်ကြေး: Hydraulic လှည့်ခံရသောလျော်ကြေးငွေ
⑤ကျွေးမွေးသည့်စနစ်: အဆိုပါကြီးမားခဲဘောလုံးကိုဝက်အူနှင့်နိုင်ငံတကာနာမည်ကျော်ကုမ္ပဏီထံမှ linear လမ်းညွှန်အဆိုပါစက်၏ positioning ကိုတိကျမှန်ကန်မှုကိုအာမခံပါသည်။ အဆိုပါအပြည့်အဝအလုပ်လုပ်တဲ့ backguage system ကိုခြောက်လဝင်ရိုးမှတက်တိုးချဲ့နိုင်ပါသည်။
① Hydraulic System ကို: မြင့်မားသောတိကျ Electro-ဟိုက်ဒရောလစ်အချိုးကျအဆို့ရှင်နှင့်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းဟိုက်ဒရောလစ်ယူနစ်နှင့်အတူအသငျ့။
ဂျာမနီ Bosch ရဲ့-Rexroth
4. ကို Standard configuration စာရင်း
CNC ထိန်းချုပ်မှုစနစ်အား DA52s
နောက်ကျော gauge နဲ့ Ram drive ကို အင်ဗာတာ
ခြေလျင် switch ကို အရေးပေါ်ခြေလျင် switch ကို
5. ပင်မနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ parameter သည်
ပုံစံ သာမန်ဖိအား အလုပ်စားပွဲ၏အရှည် င်အောင်အကြားအကွာအဝေး လည်ချောင်းအတိမ်အနက် သိုးထီးလေဖြတ် မက်စ်။ မိုဃ်းလင်း
KN မီလီမီတာ မီလီမီတာ မီလီမီတာ မီလီမီတာ မီလီမီတာ
ပုံစံ သိုးထီးတကောင်ကိုမြန်နှုန်း ပင်မမော်တာပါဝါ ယေဘုယျအားရှုထောင် L ကို× W × H ကို အလေးချိန်
ချဉ်းကပ် အလုပ်အဖွဲ့ ပြန်လာ
မီလီမီတာ / s နဲ့ မီလီမီတာ / s နဲ့ မီလီမီတာ / s နဲ့ KW မီလီမီတာ ကီလိုဂရမ်
WE67K-63/2500 100 8 100 5.5 1400 × 2750 2180 × 5100
WE67K-100/2500 100 10 70 7.5 1600 × 2750 2450 × 6200
WE67K-100/3200 100 10 70 7.5 1600 × 3450 2450 × 7650
WE67K-100/4000 100 10 70 7.5 1800 × 4250 2720 × 8900
WE67K-125/3200 100 8 70 7.5 1600 × 3450 2450 × 8100
WE67K-125/4000 100 8 70 7.5 1800 × 4250 2720 × 9450
WE67K-160/3200 140 9.5 100 11 2050 × 3450 2900 × 10700
WE67K-160/4000 140 9.5 100 11 2050 × 4250 2900 × 13000
WE67K-200/3200 140 10 110 15 2000 × 3450 2900 × 12700
WE67K-200/4000 140 10 110 15 2000 × 4250 3100 × 15100
WE67K-200/5000 140 10 110 15 2100 × 5250 3200 × 17500
WE67K-200/6000 140 10 110 15 2100 × 6250 3200 × 18500
WE67K-250/3200 140 8 100 18.5 2000 × 3450 2900 × 16000
WE67K-250/4000 140 8 100 18.5 2000 × 4250 3000 × 18000
WE67K-250/5000 140 8 100 18.5 2100 × 5250 3200 × 21000
WE67K-250/6000 140 8 100 18.5 2100 × 6250 3200 × 23000
WE67K-300/3200 140 8 110 22 2280 × 3450 3200 × 19300
WE67K-300/4000 140 8 110 22 2380 × 4250 3300 × 22000
WE67K-300/6000 140 8 110 22 2380 × 6250 3500 × 29300
WE67K-400/4000 80 8 60 30 2350 × 4250 3595 × 30000
WE67K-400/6000 80 8 60 30 2350 × 6250 3595 × 35000
ယခင်: WC67Y စီးရီး NC torsion bar ကို synchro စာနယ်ဇင်းဘရိတ်
နောက်တစ်ခု: WE67K စီးရီး CNC တွဲဖက် Electro-ဟိုက်ဒရောလစ် synchro စာနယ်ဇင်းဘရိတ်
CNC Bende စက်
CNC Hydraulic Bende စက်
ရောင်းရန် CNC Hydraulic စာနယ်ဇင်းဘရိတ်
CNC Hydraulic စာနယ်ဇင်းဘရိတ်စက်
CNC Hydraulic စာနယ်ဇင်းဘရိတ်စျေး
CNC Servo စာနယ်ဇင်းဘရိတ်
CNC စာရွက်သတ္တု Bende စက်
CNC စာရွက်သတ္တု Bende စက် / စာနယ်ဇင်းဘရိတ်
Estun E21 System ကိုစာနယ်ဇင်းဘရိတ်
Estun E21system စာနယ်ဇင်းဘရိတ်
High Quality Hydraulic စာနယ်ဇင်းဘရိတ်
Hydraulic Bende စက်
Hydraulic CNC Bende စက်
Hydraulic CNC စာနယ်ဇင်းဘရိတ်
ဟိုက်ဒရောလစ်သတ္တုစာရွက် Bende စက်
စက်ငုံ့ Hydraulic ပြား
သတ္တု Bende စက်
စာနယ်ဇင်းဘရိတ်က 100 တန်ချိန်
စာရွက် Bende စက်
စာရွက်သတ္တုဖြတ်တောက်ခြင်းပြီးတော့ Bende စက်
သံမဏိစာရွက် Bende စက်
WE67K စီးရီး CNC တွဲဖက် Electro-ဟိုက်ဒရောလစ် synch ...